लक डाउनको उल्लं घन गर्दै दरबारमार्ग क्षेत्रका पसलहरु आजबाट खोलिने !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/लक डाउनको उल्लं घन गर्दै दरबारमार्ग क्षेत्रका पसलहरु आजबाट खोलिने !!
लक डाउनको उल्लं घन गर्दै दरबारमार्ग क्षेत्रका पसलहरु आजबाट खोलिने !!
काठमाडौँ । सरकारले सबै भन्दा लामो लकडाउन लगायो भन्दै यतिबेला काठमाण्डौका व्यावसायीहरु आक्रोशित बनिरहेका छन् । जेठ ३२ गते सम्म थपिएको लकडाउनको मोडा लिटी पनि अहिलेसम्म तय नगरेको भन्दै आक्रोशित व्यावसायीहरुले राजधानीको दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसाय आजबाट सुरु गर्ने भएका छन् ।
दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसाय शुरु गर्नकोलागी दरबार`मार्ग डेभल`पमेन्ट बोर्डले मंगलबार अनौ`पचारिक छल`फल गरेको थियो । सोही छलफलकै आ`धारमा बोर्डले बुधबार देखि दरबारमार्ग क्षेत्रको व्यावसाय संचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीका अनुसार बुधबा`र सबै पसल र व्यवसाय खोलेर सरस`फाई गर्ने निर्णय भएको छ । बुधबार थप व्यवसायी र कर्मचारीसँग छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाउने निर्णय समेत भएको जनाइएको छ ।
लकडाउनका कारण व्यापार व्यावसायहरु सबै थप्प भएको हुनाले आम्दानी हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाइ कर तिर्न तोकता गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यापसायीको हितमा कुनै पनि प्याकेज सर`कारले न`ल्याएको र व्यापार व्यवसाय गर्न नदिएको भन्दै उनीहरु यति`बेला आक्रो`शित भईरहेका छन् ।
त्यस्तै पोखराका व्यावसा`यीले बन्दा बन्दी खुकुलो बनाउँदै सबै प्रकारका व्यापार÷व्यवसाय खुलाउन माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकीको मुख्यमन्त्री कार्या लयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ब न्दा बन्दीले व्यवसायी लाई मर्का परेकाले सहज वातावरणको लागि आग्रह गरेको हो ।